विमान दुर्घटनाअघि पाइलटले के भन्छन् ? यस्ता छन् ‘ब्ल्याक बक्स’ का रेकर्ड | समाचार | साझामन्च
अनलाइनखबर, प्रकाशित मिति : २०७४ ,फाल्गुन , २९ 10:23:45
काठमाडौं । विमानको अन्तिम दुई घण्टाको आवाज ब्ल्याक बक्समा रेकर्ड हुन्छ । त्यहाँ इन्जिनको आवाज, आपतकालीन अर्लामको आवाज, क्याबिनको आवाज अनि ककपिटको आवाज रेकर्ड हुन्छ । र, त्यसबाट के थाहा हुन्छ भने, दुर्घटनाका बेला जहाजमा कस्तो माहौल थियो । पाइलटहरुले के कस्तो कुरा गरेका थिए ?
सुन्तले रंगको ब्ल्याक बक्स !
विश्वका विभिन्न ठाउँमा विमान दुर्घटना हुँदा के कस्ता आवाजहरु रेकर्ड भए ? मृत्युसँग साक्षात्कार गरिरहँदा पाइलटको मुखबाट कस्तो आवाज निस्कन्छ होला ? मनमा के कुरा खेल्छ होला ? यसबारे यहाँ हामीले विभिन्न वेबसाइटहरुबाट संकलन गरिएका केही भ्वाइस रेकर्डहरु प्रस्तुत गरेका छौंः
उक्त विमानको ब्ल्याक बक्समा रेकर्ड भएको आवाज यस्तो थियो- ‘स्पिकरलाई गोली लागेको छ । मैले गोली ठोकें । म सहयोग गर्दैछु ।’
उक्त विमानको ब्ल्याक बक्समा रेकर्ड भएको अन्तिम शब्द थियो- ‘पिट…सरी ।’
उक्त विमानको व्ल्याक बक्समा रेकर्ड भएको अन्तिम आवाज थियो- ‘आमा ….आई लभ यू ।’
एयर न्युजिल्यान्ड ९०१ जहाज खराब मौसमका कारण माउन्ट इरेबसमा ठोक्कियो । उक्त विमानको ब्ल्याक बक्समा रेकर्ड भएको अन्तिम शब्द थियो- ‘खासमा, म सही हालतमा छैन, हैन ?’
पाइलटको गल्तीले एयर फ्लोरिडा विमान वासिङटनको पोटोमैक नदीमाथि बनेको पुलमा ठोक्कियो । र, पानीमा खस्यो । त्यहाँ यात्रा गरिरहेका ७४ जना मानिस मरे । त्यस जहाजको ब्ल्याक बक्समा रेकर्ड भएको आवाज थियो- ‘हामी तल झर्दैछौ…मलाई थाहा छ ।’
त्यहाँको ब्ल्याक बक्समा रेकर्ड भएको अन्तिम आवाज थियो- ‘के..के भयो ? कुनै पहाड देखिँदैछ ..हैन ?’
मिडिया कम्पनी डब्ल्यूएनबीसीको हेलिकप्टर न्युयोर्कमा हडसन नदीमा खस्यो । त्यस दुर्घटनामा रेडियो ट्राफिक रिपोर्टर जेन डार्नेकरको मृत्यु भयो । त्यसमा रेकर्ड भएको अन्तिम शब्द थियो- ‘हामी पानीमा ठोक्किँदैछौं …पानीमा …..पानीमा ।’
आइतबार त्रिभुवन विमानस्थलमा दुर्घटना भएको युएस बंगला विमानको ब्ल्याक बक्समा के रेकर्ड भएको होला ? पक्कै पनि अनुसन्धानपछि त्यसको खुलासा होला ।